ယူကေ ရေကာတာ နဲ့ ဆည်များ – UK Dams and Reservoirs XI | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » ယူကေ ရေကာတာ နဲ့ ဆည်များ – UK Dams and Reservoirs XI
ယူကေ ရေကာတာ နဲ့ ဆည်များ – UK Dams and Reservoirs XI
Posted by Kyaemon on Nov 3, 2012 in Education, Environment, Photography, Society & Lifestyle, Travel |7comments
Alwen ရေကာတာ က ၁၉၁၆ ကတည်ဆောက်ခဲ့လို့ (၉၆) နှစ်တောင်ကြာပါပြီ
ကျောက်စာမှတ်တမ်းအရ ကျောက်တုံးတွေကို ၁၉၁၁ က စခင်းတာ၊လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၁၁ နှစ်တုန်းကစလုပ်တာ၊
IMG_3130 | Flickr – Photo Sharing!
IMG_3145 | Flickr – Photo Sharing!
Alwen Dam | Flickr – Photo Sharing!
Search results for ALWEN DAM
Alwen Reservoir6| Flickr – Photo Sharing!
Alwen Reservoir 6
Wales ဝေလပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း Conwy ခရိုင် Pentre-Llyn-Cymmerအရပ်နားရှိဒီ Alwen ရေကာတာဆည် က ၅ ကီလိုမီတာ ၁၆၄၀၄ ပေ ရှည်ပြီး ၂၇ မီတာမြင့်တာ (၈၈.၆ ပေ) Afon Alwen မြစ်ပေါ်ကရေကာတာလုပ်တာ၊
Liverpool မြို့နားက Birkenhead မြို့အတွက်ရေတင်ပို့ဘို့မူလကရည်ရွယ်တာ
The Alwen Reservoir or Cronfa Alwen isa5km long reservoir near in the county borough of Conwy, North Wales, held back by the 27 metre high Alwen Dam. It impounds the Afon Alwen, and the dam is 8km downstream from Llyn Alwen. It was built between 1909 and 1921, originally to supply water to the town of Birkenhead, near Liverpool. Today it is part of the River Dee regulation system and is operated by Welsh Water / Dŵr Cymru (DCWW).
မြေကြီးဆွဲငင်စွမ်းအားသုံးမုက်ခုံးပုံနဲ့ပါ၊ ကျောက်တုံးကြီးသုံးတာ၊ Contractors ကန်ထရိုက်တာတွေက Sir Alex Binnie…. တို့ပါ၊
ရေသန့်စင်တဲ့အဆောက်အဦရှိသေးသော်လဲဘဲ စက်ကရိယာတွေမရှိတော့ပါ၊မြေ အောက်ကရေသွယ် Cast Iron သံ တံတားလုပ်ထားတာ၊
The dam isagravity-arch masonry dam. The “first stone” of the dam records that the engineers were Sir Alex. Binnie, Son and [George] Deacon and the contractors were Robert McAlpine and Sons. A large water treatment facility was built below the dam, andacast iron underground aqueduct laid to Birkenhead. The original water treatment buildings are still standing, but the equipment inside has long gone, replaced by modern plant inanew building
Search results for alwen reservoir
Claerwen ရေကာတာကို ၁၉၅၂ ကတည်ဆောက်ခဲ့လို့(၆၀) နှစ်တောင်ကြာပါပြီ
Search results for claerwen dam
Claerwen Dam | Flickr – Photo Sharing!
Claerwen ရေကာတာ ကိုဆိုလိုတာ အနီးအနားက Pennygarreg လို့ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်မှားတပ်တာ
Penygarreg Dam, Elan Valley, Wales | Flickr – Photo Sharing!
84 Photos of [uk dams] , within 10km of grid reference SN8763 :: Geograph Britain and Ireland – photograph every grid square!
Claerwen Dam:: OS grid SN8763 :: Geograph Britain and Ireland – photograph every grid square!
Photos, labeled [Claerwen Dam Reservoir], in grid reference SN8763, in order :: Geograph Britain and Ireland – photograph every grid square!
၁၈၈၁ မှ ၁၉၀၀ ထိ ကာလအတွင်း ဆောက်လုပ်ထားပြီး ကြံ့ခိုင်တည်မြဲဆဲ ယူကေ ရေကာတာ ဆည်ကြီးများ ဇယား
(၁၁၂ နှစ် မှ ၁၃၁ နှစ်အထိ သက်တမ်းရှိ ရေကာတာနဲ့ဆည်ကြီးတွေပါ၊ ယူကေနိုင်ငံအားအကျိုးပြုတုန်းဘဲ )
Wessenden Head n/s 1881 131 years (၁၃၁ နှစ် ရှိပြီ)
Abbeystead n/s 1881
Camphill n/s 1881
Barden (upper) n/s 1882
Ramsden n/s 1883
New Years Bridge n/s 1883
Neuadd (lower) n/s 1884
Coldwell (lower) n/s 1884
Dunside (upper) n/s 1884
Colt Crag n/s 1884
Crow Holw n/s 1885
Ballure n/s 1885
Dowry n/s 1888
Ramsden Clough n/s 1888
Ardsley n/s 1888
Little Denny n/s 1888
Lagmore n/s 1888
Laneshaw n/s 1889
Windleden (upper) n/s 1890
Castleshaw (lower) n/s 1891
Leathemstown n/s 1891
Castleshaw (upper) n/s 1891
Cant Clough n/s 1892
Churn Clough n/s 1892
Cantref n/s 1892
Carlhurlie n/s 1892
Vyrnwy n/s 1892
Cefn Court n/s 1893
Winterburn n/s 1893
British Camp n/s 1894
Lliw (upper) n/s 1894
Withens Clough n/s 1894
Hury n/s 1894
Thirlmere n/s 1894
West Corrie n/s 1895
Damflask n/s 1896
Blackton n/s 1896
Touch No4n/s 1896
Mosshouse n/s 1897
Lossburn n/s 1897
Clough Bottom n/s 1897
Beacons n/s 1897
Fewston n/s 1897
Eccup n/s 1897
Burrator n/s 1898
Kype n/s 1898
Nant Moel n/s 1898
Glengavel n/s 1898
Green Withens n/s 1898
Barrow No3n/s 1899
Snailsden n/s 1899
Harlock n/s 1899
Thorters n/s 1900 112 years (၁၁၂ နှစ် ရှိပြီ)
“(ဒေါ်စုကတောင် ရောက်ဖြစ်မယ်လို့မထင်ရပါ)” ဆိုပဲ
ကြေးမုံဂျီးရေ တရုတ်ကြီးလုပ်လို့ သစ်ပြုန်း ဝါးပြုန်း တောင်ကတုံး မြေဆီလည်းဆုံး အကုန်ဖြုန်း.. အခုလည်း နွားမျိုးတုံးတော့မည်ထင်ပ….
မန်မာ့သတင်း » တရုတ်သို့ပိုရန် ဆမ္မဆယ်၌ နွားကောင်ရေ (၅၀၀)ကျော် ရောက်ရှိ
ရေကာတာ စပယ်ရှယ်လစ်ကြီး :-) တီလုပ်က ရေကာတာဆောက်တဲ့ ကန်ပနီ တွေနဲကအမျိုးတော်လို့ပဲဖြစ်မယ် ခနခနတင်နေတာထောက်ရင်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရှာဖွေစုစည်းပြီးတင် ပြထားတော့ ဗဟုတသုတရလို့ကျေးဇူးပါ
၁၊ “ဗဟုတသုတရလို့ကျေးဇူးပါ” ဆိုတာကို ကြိုဆိုလက်ခံပါတယ် ခင်ဗျ၊
၂၊ “ရေကာတာ စပယ်ရှယ်လစ်ကြီး” ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့
အများပြည်သူ ဗဟုတသုတရကြဘို့ အများအကျိုးဆောင်ရအောင်
ကိုရင်myanmarcitizen တို့လဲ အချိန်ပေး ဝါယမ စိုက်ထုတ် ပါဝင်ကူညီပါလို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဗျာ၊
စပယ်ရှယ်လစ်တွေ များလေကောင်းလေ၊ယုံမှားသံသယ ယိုးစွတ်တာလဲ သက်သာလေ၊
၃၊ “ကန်ပနီ တွေနဲကအမျိုးတော်လို့ပဲ” “ခနခနတင်နေတာထောက်ရင်”
ရေကာတာ အကြောင်း များများတင်ပေးဘို့ ရှေ့ပိုင်းက လူတွေကတောင်းဆိုတာရှိတယ်၊
နိုင်ငံအသီးသီးက လေ့လာလိုတာရယ်၊နိုင်ငံတခုတင်ရေကာတာ ရာချီ ထောင်ချီ ရှိတာရယ်(သောင်းချီလဲရှိတာ)
နော်ဝေကန်ပနီ အကြောင်းအောက်ပါ link လင့်ခမှာ ရေးထားတာကို ညွှန်းလိုတာပါ
Veiddekke ဟာ နော်ဝေနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ကုမ်ပဏီ ဖြစ်တာ၊
အဆောက်အအုံ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပြန်လည်မွမ်းမံရေးလုပ်ငန်း၊
အုဠ်ခဲ ကျောက်စရစ်ခဲထုတ်လုပ်ရေး စတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကို ဆောင်ရွက်တာ
၁၉၇၂ မှာ Veiddekke က Heggmoen ရေကာတာ ဆောက်ဘို့ကန်ထရိုက်နိုင်ခဲ့တာကစပြီး
နော်ဝေပြည်သူတွေက ပိုင်တဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေ အနက်မှVeiddekke ဟာ
၁၉၈၀ ပတ်ဝန်ကျင် တုန်းက အမှတ်စဉ် ၉ နေရာယူခဲ့တာ၊ ခုခါမှာဆိုရင် အကြီးဆုံးဖြစ်လာတာ၊
Veiddekke ရဲ့လက်ရာ အချို့ကိုတင်ဆက်လိုက်တာပါ၊ ၄င်းက ရေကာတာတွေရဲ့ Core ဗဟိုရ်ချက်မ အူတိုင်တွေမှာ
Asphalt နိုင်လွန်ကတ်တရာ ခင်းပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို အထူးကျွမ်းကျင်တာ၊
ဘရာဇီး နိုင်ငံ က Foz od Chpeco နိုင်လွန်ကတ်တရာအူတိုင်ပါ ရေကာတာ
ဆော်ဒီအာရေးဗျ က Murwani နိုင်လွန်ကတ်တရာအူတိုင်ပါ ရေကာတာ
ကနေဒါက နိုင်လွန်ကတ်တရာအူတိုင်ပါ ရေကာတာ တွေ
တရုပ်ပြည်က Mao Pin Xi နိုင်လွန်ကတ်တရာအူတိုင်ပါ ရေကာတာ
စပိန်က Mora de Rubielos နိုင်လွန်ကတ်တရာအူတိုင်ပါ ရေကာတာ
ကြေးမုံ ကလောင် နံမယ် ကိုနှိပ်ရင် အခြားရေကာတာ အကြောင်းတွေအစုံအလင်တွေ့မှာပါ၊
မှတ်ချက်။ဒါတွေရေးတာ တပြားတချပ် မှ မရပါ၊ ဗဟုသုတရဘို့သက်သက်ပါ၊
အဘတို့ အားပေးနေပါတယ်နော် ။
နောက်တတ်တဲ့ ဦးကြောင်ကိုတော့ စိတ်မဆိုးပါနှင့် ။
ကြေးမုံဂျီး စိတ်မဆိုးပါနဲ့..၊ ဝလည်း တရုတ်ကြောင်ကြီးပါ။ ရွာထဲမှာ နီကိုးလပ်စ်ဆိုတဲ့ငတိ ဝတို့တီလုပ်သမိုင်းကို မကောင်းရေးနေတာ တားဆီးရအောင် ကြေးမုံဂျီးနဲ့ လက်ခြင်းယှက် လက်ခြင်းထပ်ပါရစေ။ သဘောတူရင် နောက်ထပ် ရေကာတာပို့စ် တင်လိုက်ပါ။ အဲလိုဆို တရားဝင် ကျေနပ်လက်ခံကြောင်း သတ်မှတ်ပြီး မင်္ဂလာလက်ဆောင် ရွှေစင်အချိန် တသိန်းတိတိ ပို့လိုက်ပါ့မယ်။
ဟီး စိတ်ဆိုးပါနဲ့။ အရင်တုန်းကတော့ ကိုKyaemon ရေကာတာအကြောင်းတင်ရင်ကြည့်ဖတ်ပဲဖတ်ပြီးပြန် လစ်သွားတာ တစ်ခါမှ comment မပေးဘူးဘူး။ ဒီတစ်ခါတော့ ရေးလိုက်အုန်းမယ်ဆိုပြီးရေလိုက်တာ (သဂျီးအိပ်ကပ်ထဲက ၁၆ ကျပ်လိုချင်တာလဲပါဒါပေါ့လေ) :-)
တကယ်တော့ ဒီအကြောင်းကိုအရမ်းစိတ်ဝင်စားတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အစိုးရဓါတ်ကြိုးတွေမရှိတဲ့ နေရာလေးမှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရလို့ပါ။ အသေးစား တာဘိုင်နဲ့ ရေအားလျပ်စက်ဘယ်လို ထုတ်တယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆည်ကလွတ်တဲ့ မြောင်းကနေလျပ်စက်ကိုဘယ်လိုထုတ်တယ်(မမြဆည် ရှာတွေ့တာ) မစားရ၀ကမန်း တနေ့တစ်နေ့ ရှာကြည့်ပြီးပိတိဖြစ်နေတဲ့ ငတိတစ်ကောင်ပါဗျာ။ ဒီတော့ သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ ခွင့်လွတ်လိုက်ပါဗျာ။
ဒီလိုရေးနေရင် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုသွားသတိရတယ်ဗျ။ ဒီကောင်ကတစ်ယောက်ယောက်ကို စိတ်တိုအောင်လုပ်ပြီးရင် သူကမေးတယ်။ “သူငယ်ချင်း မင်းစိတ်ဆိုးသွားလားတဲ့…” ဟိုက “ရပါတယ်ကွာ” လို့ပြန်ပြောရင် ဒီကောင်က “အေးစိတ်ဆိုးလဲ ငါကစောက်ဂရုမစိုက်ဘူးကွာ “တဲ့ရီကျဲကျဲနဲ့ ဟီး အဲ့ဒါကိုသွားသတိရတာပါ ကိုကြေးမုံရေ :-)